Umzekelo Isivakalisi esinokuhlangana
Uyazi kakuhle isenzi esingaqhelekanga "ukudibana" ekufundeni malunga nezethulo , kodwa unokungazi ifomu elifanelekileyo ngexesha ngalinye. Eli phepha linika izivakalisi zesiqheliso sesenzi "ukudibana" kuzo zonke iiNgesi. Hlola ulwazi lwakho olutsha ngemibuzo ekupheleni.
Imizekelo 'Yokudibanisa' Yonke Ixesha
Ifom yeBakala idibana / Ixesha elide elidibeneyo elidibeneyo / I-Past participle yadibana / yeGerund
Sivame ukudibana ngoLwesihlanu ngemini.
Uhlala udibana nabahlobo bakho ngesidlo sasemini?
Abaqhele ukuhlangana nabantu abaninzi abatsha xa behamba.
Sidibana nomthengi omtsha kule ntsasa.
Ngaba badibana nabani na okwangoku?
Akadibana nomlawuli. Udibana noTom.
Abahlobo bam baye badibana namasemini yonke imihla ngeli veki.
Ngaba udibene noCheryl?
UJeanne akazange adibane noPeter.
Sidibene nabantu abatsha ngeeyure ezingaphezu kweyure.
Baye badibana kuphi?
Akazange adibane nebhodi ixesha elide.
Umfazi wam kwaye wadibana kwisikolo saseNgesi.
Udibana nini nomhlobo wakho omhle?
Abazange bahlangane kunye kunyaka ophelileyo.
Sadibana noTom xa ephazamisekile ngeendaba.
Ngaba udibana nabathengi ngehora lesithathu izolo?
Wayengazange abonane nabani na xa efika.
UJanet wayesele edibana noJack xa ndawazisa.
Badibanise nini ukuba baxoxe ngale ngxaki?
UJeff akazange adibane naye ngaphambi kokuya kwenkomfa iveki edlulileyo.
Sasidibene kwiiyure ezimbini xa ekugqibeleni wafika.
Wayede udibana nani xa ebiza?
Babengazange badibana ixesha elide xa bephazamise intlanganiso.
Uya kudibana noJack kwisikhumulo seqonga ngeveki elandelayo.
Siza kudibana nini nesithandwa sakho esitsha?
Akayi kudibana namasemini.
U-Nancy uya kuhlangana noFred ngo-Pairs ngeveki ezayo.
Uya kudibana nani nomhlobo wam uAlice?
Akayi kuhlangabeza nabani na abatsha kuloo nkampani .
Siza kudibana nabathengi abatsha ngeli xesha ngomso.
Uya kubaphi na ukudibana nawe ngesidlo sasemini ngehora enye?
Abayi kuhlangana nam ehotele kusasa ngemini.
Abahlobo bethu baya kudibana nemingeni emininzi ngexesha begqibile le projekthi.
Bangaphi abantu oza kudibana nabo kwiintsuku ezimbalwa ezilandelayo?
Abayi kudibana nayiphi na imbopheleleko yabo phambi komhla wokugqibela.
Qaphela kwiLizwi eliMnyama
Iminye yemizekelo yezivakalisi ibonisa izivakalisi ngelizwi elisebenzayo. Izwi elisebenzayo lide lilizwi eliqhelekileyo kwisiNgesi. Kwilizwi elisebenzayo, esi sifundo senza into. Ngokwahlukileyo, ilizwi elidlulileyo libonisa oko kwenziwa kwimixholo. Nasi umzekelo okhawulezayo wokohluko:
Izwi elisebenzayo -> Ndidibene nomdlali odumile ngaphambili.
Izwi elincinci -> Iimoto zenziwe eDetroit.
Njengoko uyakubona, ilizwi elingazange ligxininise kulowo owenza into ethile. Ilizwi elixhasayo ligxile kwizinto ezenziwe kwinto ethile. Izwi elidityanisiweyo lenziwa ngokuqulunqa isenzi "ukuba." Kwizivakalisi "ukudibana", cwangcisa isenzi "ukuba" silandelwe ifomu efanelekileyo "yokudibana."
Iindwendwe ziya kudibana ngeyure yesixhenxe.
UPetros uya kudibana kwisikhululo se-moya ngenkonzo yemoto.
Imibuzo: I-Conjugate kunye ne-Meet
Sebenzisa isenzi "ukudibana" ukudibanisa izivakalisi ezilandelayo. Izimpendulo ze-Quiz zingezantsi. Kwezinye iimeko, impendulo engaphezulu kweyodwa ingalungile.
Bangu- _____ kwisikhumulo sezindiza ngabameli beenkampani.
UFred _____ kunye no-Alyssa xa uPetros waphuma egumbini ngeendaba.
_____ uCheryl _____ nabani na bakho bahlobo bakho?
Sidla ngo- _____ ngoLwesihlanu emva kweentsuku.
Si- _____ iiyure ezimbini xa ekugqibeleni wafika.
Ulawulo ngokuqhelekileyo ngu- _____ nabasebenzi abatsha ngoMsombuluko kusasa.
Umkami kunye ne- _____ kwisikolo saseNgesi.
Abahlobo bethu _____ imingeni emininzi ngethuba lokugqiba le projekthi.
Ukuba ngu- _____ e-khululini, wayenokundinika ukuhamba ekhaya.
U-Nancy _____ uFred ngeeBili ngeveki ezayo.
Ukwakha iFrench French
Isiphulo sesiFrentshi: Njalo 'Si You Voulez.' Ungaze 'U-You Voudriez'
Umkhombandlela-nyathelo-ngeNyathelo -Nqamaniso yokuQoqa 'I-Arriver' (Ukufika)
Into enokuyenza Ukuba Unomntu ongcolisayo
Isikhokelo sokukhetha uhambo lweMigodi yokuPhupha nokuPhepha
Biography kaJanet Yellen
Zingaphi Amazwe AseAfrika Ahlaselwa?